Mufotori wemutambi anorekodha nyika yemutambi we ballet kubva pachikuva - Nhau - Fitdance ballet tutu fekitori.
Imba > Nhau > Indasitiri nhau > Mufananidzo we ballet anorekodha nyika yemutambi we ballet kubva pachikuva
Panhandare, basa remutambi we ballet raigara riri rekuita zvakanaka uye zvine mutsindo. Uye kuseri kwemutambi wese akabudirira, kune mazuva asingaverengeke ekudzidzira, kuti asvike pakakwana mamiriro.
Darian Volkova, mutambi wechidiki akabatana neSt. Petersburg Theatre, ave achiona hupenyu kubva padanho revafambi vake nevakatangira iye kwemakore. Akafunga kutora kamera uye kurekodha pasi rose padanho remutambi we ballet.
Darian Volkova, anobva kuSt. Petersburg, mutambi we ballet uye munyori wemifananidzo. Pamusoro pechinyakare mashandiro ebharlet, ndeye kupfura ballet.
Kukura munhandare, ballet yakangofanana neyehupenyu hwayo. Anotarisira kurega hupenyu chaihwo hwevatambi ve ballet kuti huwonekwe nepasi kuburikidza ne lens yemapikicha emifananidzo. Akanga asingadi kuti mufananidzo uve wakanaka, asi aida kutaura nyaya yemutambi we ballet.
(Mimwe mifananidzo uye zvinyorwa muchinyorwa chino zvinobva paInternet. Kana paine kukanganisa, ndokumbirawo ubate kuti ubvise.)
Yapfuura:Zera rakanakisa rekudzidza ballet
Tevere:Kuongorora - kweakakosha - ballet - yepanyama kudzidza